भूत सभाको सन्त्रास | samakalinsahitya.com
बाल्यकालमा आमा बुबाले,आफन्तजनले आफ्ञ्ना नानीहरुलाई फकाउन , डर देखाउन भूत आयो भूत आयो भन्दै तर्साउने गर्दथे ।रोएर हैरान पारेमा तै चुप लाग्छन् कि भनेर हाउगुजीले खान्छ भनेर तर्साउनु हुन्थ्यो । त्यसको असर जिन्दगीभर पर्दोरहेछ । अहिले पनि भूतको कुरा गर्दाँ आङ सिरिङ्ग हुन्छ । डरले सातोपुत्लो जान्छ । लुगलुग काँप्न थाल्दछु । होसहवास सबै उडेर चेतनशून्य हुन्छु । रातको समयमा भूतहरुको चलखेल हुन्छ भन्ने कुरा त जोसुकैलाई पनि अवगत भएकै कुरा हो । मध्यरातमा उनीहरु खुब रमाउदै यताउति हिड्छन् । दिनचरहरु रातमा हिडडुल गरेमा उनीहरुले सिकार बनाउछन् रे। त्यसो भनेपछि त झन् डर लाग्छ मलाई त । आफ्नो ज्यानको माया त लागिहानछ नि । बाँचे संसारमा यी दुई टोड्.का आँखाले अनेक कुराहरु देख्न पाइन्छ । यी दुलो परेको दुई कानले अनेक कुराहरु सुन्न पाइन्छ ।
एउटा भूत गाँउमा छि¥यो भने सारा गाउँलेलाई पिरेर हैरान पार्दछ । रातदिन धामी झाँक्री खोज्दा र लगाउँदा लगाउँदा हैरान बनाउँदछ । वैज्ञानिक युग हो धामी झाँक्री नलगाउ भने पनि कहिले कलिला लालावालालाई सताउछन् । कहिले ठूलालाई मरणासन्न हुने गरी पिर्छन् । कहिले पशु चौपायालााई थलाको थला मै लम्पसार पारिदिन्छन् । अस्पतालको औधषी त जति सेवन गरेपनि वीसको उन्नाइस हुदैन । बरु प्रतिक्षा गर्दा गर्दा आशाको डोरी चुडिसक्छ तर रोग विसेक हुने कुनै छेकछन्द आउदैन ।अनि विवश भएर धामीको शरणमा पुग्नु पर्दछ । ढीलो चाडो रोग निदानको लागि पहल गरिन्छ । केही राहात पनि मिल्दछ ।
यी घरगाउँमा आउने भूत भन्दा पनि वीसौं गुणा भएङ्कर अर्को भूतसभाको पो डर लागिरहेछ । संविधान बनाउनका लागि भनेर दुई वर्षको अवधि दिएर सभाषद्हरुलाई निर्वाचित गरेर नेपाली जनताहरुले पठाएका थिए । आफ्नो आयुको वास्ता नै नगरिकन संविधान बनाउनु भन्दा पनि खाली सत्ता लोलुपतामा लागिरहे । “जसको निम्ति गोठ बनायो उसको पुच्छर बाहिर “भने झै संविधान बनाउनुको सट्टा आफ्नो शक्तिको प्रदर्शनमन व्यस्त रहे । “जब प¥यो राती कानी बूढी ताती “भने झै संविधानसभाको म्याद सकिने दिनको पनि अन्तिम घडीमा आएर भ्याइ नभ्याइकन रातविरात संविधान बनाउन दत्तचित्त लगाएर नेपाली जनताका आँखामा छारो हाल्ने दुस्साहस गर्थे । दुई वर्षको आयु सकिएर पनि अर्को दुई वर्ष भूत भएर नेपाली जनता देश समयलाई तर्साइरह्यो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मरेर पनि भूत भएर पनि पुःन मरिसक्यो भनेर घोषणा गरिसक्यो । आफ्नो आयु भरी त जगजगी गरेर नेपाल जस्तो पूण्य भूमिलाई अधोगति तर्फ धकेल्न निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गरे । अब त मुलुकले मुत्तिको बाटो अवलम्बन गर्लान् भनेको त पुःन ६०१ भूतहरु हामीहरु बीच फेरि व्यूझिनु पर्छ भन्दै सरसल्लाह पो गर्न थालेकाछन् ।यस्ता कुरा सुन्दा आम नेपाली जनताका मनमा कस्तो भावनाहरु उब्जिएलान् । लाजसरम पचेका भूतहरु फेरि पनि जागाजोति भएर नेपालमा मोजमस्ती गर्न लालयित छन् , खवरदार यस्ता कुचेष्टा गरेमा नेपाली जनताले कदापि क्षमा दिने छैनन् । किनकि आयु सकिएको वायुले जे पनि गर्न सक्दछन् । प्यारो देश र नेपाली जनताको पीर चिन्ता भएको भए आफैले मागेको समय सीमा भित्र संविधान बनाएर नेपाली जनताका हात हातमा नयाँ संविधान पु¥याइसक्थे तर खै  माछा माछा भ्यागुतो ”भने झै भयो । संविधान आँउछ आँउछ भन्दा भन्दै आखिरमा हात लाग्यो शून्य भयो ।
भूतसभा पुनः व्यूँतिए भने यिनीहरुले जे गर्न पनि पछिपर्ने छैनन् । देशकै अस्तित्व खतरामा पर्न लागेको अवस्थामा पनि सत्तामा जाने र झण्डावाल पजेरोमा चढेर रवाफ र शानका साथ हिड्न पल्केकाहरु सधै त्यसैको लोभमा जे जस्तो वाचा कसम पनि चुकाउन पनि पछि पर्दैनन् । भूतहरुलाई के को लाज के को सरम ? एकैछिनमा काटाकाट गरुला झै गरेर वाक युद्घमा उत्रन्छन् । फेरि घाँटी जोडेर एउटै कार्यक्रममा उद्घाटन गर्न पुग्छन् । हुनसम्मको नाटक देखाउछन् । सत्ताको भागबण्डा नमिलेमा घुक्र्याउछन् , दंग्याउछन् । आखिरमा मिलेर सहकार्य पनि गर्नपछि पर्दैनन् । पार्टी फुटाएर रुखमा ऐँजेरु पलाए झै पलाउन पनि पछि पर्दैनन्.। यिनीहरु माथि कुनै पनि कुरामा विश्वास गरिहान्नु हुदैन । धोका माथि धोका दिन सक्छन् । त्यसैले समयमा नै सचेत भएर रहनु आवश्यक छ । कुनै पनि हालतमा भूतसभा बनाउन दिनु हुदैन ।
पूर्वको भूत, पश्चिमको भूत, उत्तरको भूत दक्षिणको भूत चारै दिशाको भूत भेला भएपछि त के चाहियो र को भन्दा को कम र? पूर्वेलीहरु भन्छन् अरुण पूर्वका भागको छट्टै राज्य हामीलाई चाहिन्छ । हामीहरुले ल्याएका प्रस्तावहरु सही छन् । समय सान्दर्भिक छन् भन्दै अडानमा बस्ने गर्छन् । पश्चिमेलीहरु पनि हामीले नेपाली जनताका सही मागलाई ल्याएका छौ त्यसैले हाम्रंो प्रस्तावलाई पारित गरिनु पर्दछ भन्दै अडानमा बस्छन् । समयले मागेको नेपाली जनताका सही सम्बोधन गरिएको आगामी दश वर्षमा नेपाललाई समुन्नत विकास गरी विश्वका अति विकसित मुलुकको दाँजोमा अग्रपंक्तिमा ल्याउने किसिमको छ त्यसैले हाम्रो मागलाई अक्षरश पास गरिनु पर्छ भन्दै मोर्चावन्दी बन्दछन् दक्षिणका भूतहरु । नत्र त सदनबाट सडकमा ,जनता माझ गएर सदन अवरुद्घ गर्न पनि पछि पर्ने छैनन् । उत्तरी दिशाका भूतहरु झन् के कम र । हामी त हिमालको चिसो हावा खाएर, हजारौं हजार किसिमका जडिबुटीका वासनादार हावापानीमा हुर्किएको मानिस हौँ । स्वच्छ वातावरणमा हुर्किएकाको मन पनि एकदम कञ्चन छ कुनै छलकपट छैन । त्यसैले हाम्रंो प्रस्तावलाई केही पनि थपघट नगरिकन समेटिनु पर्दछ । हामीहरुलाई हिमाली राज्य छुट्टै चाहिन्छ । भनेर एक आपसमा बाझाबाझ गर्न पनि पछिपर्ने छैनन् ।त्यति मात्र हो र थुम्की नै पिच्छेका भूत छन् । जातै पिच्छेका भूत छन् । भाषै पिच्छेका भूत छन् । पार्टी भित्र पनि फरक फरक विचार बोक्ने भूतहरु छन् । हरेक भूतका आ–आफ्नै मागहरु छन् ।
नेपाललाई ससाना राज्यहरुमा टुक्रा टुक्रा पारेर सत्यानास पार्न बेर लगाउँदैनन् । यी लाजसरम पचाएका भूतहरुले । त्यसैले कुनै पनि हालतमा भूतहरुलाई चलखेल गर्ने अवसर प्रदान गर्नु हुदैन । राष्ट्र , राष्ट्रियता र नेपाली जनताका लागि जस्तै मूल्य चकाउनु परेपनि, ज्यानकै बाजी लगाउनु परेपनि पछि पर्नु हुदैन । नेपाली जनताका अगाडि अव परीक्षणको घडी आएको छ । होस पु¥याएर काम गर्नु पर्नेछ । कुनैपनि हालतमा भूतसभा व्यूतिन दिनुहुदैन ।
प्रकाशित मिति : प्रकाशन मिति : सोमबार, 13 माघ, 2070